Ibhlog-yeNINGBO MINGYU MOLDUYENZIWA KWEENKQUBO., LTD
Inaliti ngumngundo ziinxalenye ezinika iimilo zeplastikhi kunye nobukhulu ngexesha yokubumba. Nangona ubume besikhunta bunokwahluka kakhulu ngenxa yokwahluka nokusebenza kweeplastikhi, imilo kunye nolwakhiwo lweemveliso zeplastiki, kunye nohlobo lomatshini wenaliti, ulwakhiwo olusisiseko luyafana. Ukubumba ngenaliti ikakhulu enamalungu amathathu: inkqubo gating, izahlulo ezibunjiweyo kunye namacandelo noshowo. Phakathi kwazo, inkqubo yokuthulula kunye neenxalenye ezibunjiweyo ziinxalenye ezinxibelelana ngqo neplastiki kunye notshintsho ngeplastiki kunye nemveliso. Ngawona macandelo entsonkothileyo kunye nezona zinto ziguqukayo ekubumbeni kweplastiki, ezifuna ukugqitywa kokugqwesa kunye nokuchaneka.
Ukwenzela ukuphucula umgangatho wokubumba weplastikhi, ukunciphisa izikhalazo zomgangatho wokungunda, kunye nokuhlangabezana neemfuno zabathengi xa sivelisa ukungunda, sishwankathela kwaye sishwankathela iingxaki eziqhelekileyo kwimveliso yokubumba, ukumisela imigangatho, nokumilisela njengoko kufuneka. Ngokwamava ethu emveliso, sishwankathela ukuveliswa komngundo oqhelekileyo kula manqaku angama-30 alandelayo: kwizikhewu zokubumba ezingaphezulu kwe-1, zonke iitemplate kubandakanya iipleyiti zethimble kufuneka zibe yimingxunya yokuhombisa; 2020. Imijelo yokukhupha amanzi kufuneka yenziwe ngomatshini kwisithuba sesikhokelo kunye nomkhono wesikhombisi esingenanto sokubumba ukukhusela iposti yesikhokelo kunye nomkhono wesikhokelo ekuxineni; 2020. Akufanele kubekho iimbombo ezibukhali kwi-mold, kwaye i-chamfering iyadingeka. Ngaphandle kweendawo ezichaziweyo ngokukodwa; 2. Izinto zokubumba zangaphakathi nezokungunda akufuneki zidityaniswe ngaphandle kwemvume; 3. Indawo yokukhupha amanzi kufuneka ivulwe kwindawo efanelekileyo kumda wemveliso yokubumba. Ukubalula kwemijelo yokukhupha, nceda ujonge kwincwadana yoyilo lokungunda;
Inkqubo yembaleki eshushu inokuqondwa njengokongezwa koomatshini bokubumba inaliti. Umsebenzi wenkqubo yembaleki eshushu kukuhambisa ukunyibilika kwe-thermoplastic kwindawo ekufuphi yokubumba okanye ngokuthe ngqo kwi-die adiabatic. Iimbaleki ezishushu zinokufudunyezwa ngokuzimeleyo, kodwa zigqume i-thermally kumbumba wenaliti, ukuze ikwazi ukubuyisa ilahleko yobushushu ebangelwe kukudibana "nokubanda" ukungunda. Hot ngumngundo imbaleki zisetyenziswe ngempumelelo ukwenza izinto ezahlukeneyo zeplastiki. Phantse zonke izinto zeplastiki ezinokuqwalaselwa ngumngundo wembaleki ezibandayo zinokulungiswa ngomngxunya wembaleki eshushu.
Ukucoca i-bumper yeplastiki yemoto
zeplastiki eludongeni inaliti ziphene sokubumbela
elawulwa kude iqokobhe inaliti inaliti